Khamri Talyaani ah - Dukaan khamri ah WeVino
Koobabkii Talyaani. Khamriga Talyaaniga waa isku darka caadooyinka qadiimiga ah ee khamriga iyo gobollada khamriga xiisaha leh. Tani waa isku darka taariikhda khamriga iyo waayo-aragnimada khamriga. Ku raaxayso noocyada Talyaaniiga ah ee tayada leh ee laga keenay gobollada kala duwan ee dukaankayaga khamriga. Waxaan isku daynay oo doorannay khamri kasta oo Talyaani ah dukaankayaga! Waxaad la yaabi doontaa soo uruurinta koobabka Talyaaniga!
€ 38.00 Sale
€ 8.00 Sale
Vigneti del Vorg
€ 10.40 Sale
€ 8.54 Sale
€ 9.28 Sale
€ 13.92 Sale
€ 93.90 Sale
€ 657.00 Sale
€ 58.00 Sale
€ 38.20 Sale
€ 23.20 Sale
€ 288.80 Sale
€ 24.00 Sale
€ 19.70 Sale
€ 82.90 Sale
€ 116.00 Sale
€ 35.90 Sale
€ 14.00 Sale
€ 346.00 Sale
€ 208.00 Sale
€ 220.00 Sale
€ 140.00 Sale
€ 60.30 Sale
Vietti Barolo Castiglione, Casaan 2010
€ 74.00 Sale
Giacosa Bruno Barolo Falletto Casaanka 2016
€ 212.00 Sale
€ 223.00 Sale
€ 466.00 Sale
Khamriga Renato Ratti
€ 98.60 Sale
€ 275.00 Sale
Vietti Barolo Rocche Casaan 2012
€ 150.00 Sale
WeVino - Khamri iyo bixinta jinniyo
Strada halkii Lazzaretto 2, 34015, Muggia
Taageerada macaamiisha tageero@wevino.store
Dukaanka Khamriga - Shuruudaha iyo Xaaladaha:
Dukaanka Khamriga WeVino - Dukaanka Khamriga ee Tayada Sare leh. Bixinta Khamriga
Khamriga ugu dhaqsiyaha badan iyo jinniyo gaarsiinta ku dhowaad waddan kasta oo adduunka ah. Gaarsiinta damaanad khamri iyo jinniyo leh ilaalinta lacag bixinta oo dhameystiran. Waxaan ku iibinnaa kaliya khamri dhif iyo naadir ah iyo ruuxyo leh qiimeynno hogaaminaya adduunka. Dukaankeena khamriga waa goob kulan oo loogu talagalay khamriga iyo ruuxa jecel iyo maalgashadayaasha khamriga sidoo kale. La-talin bilaash ah iyo qiimo dhimis loogu talagalay macaamiisha gaarka loo leeyahay iyo ganacsatada.
Wargeyskeena Warshad Dukaan
© 2021, Dukaan khamri WeVino
riix badhanka furaha kadibna furaha arrow si aad u sameyso xulasho
Waxaan isticmaalnaa buskudka. Kuwo badan ayaa lagama maarmaan u ah inay ku shaqeeyaan websaydhka iyo shaqooyinkooda, kuwa kale ayaa loogu talagalay ujeedooyin tirakoob ama suuqgeyn. Go'aanka "Kaliya aqbal cookies-yada muhiimka ah" waan ixtiraami doonnaa asturnaantaada oo ma dejin doonno cookies-ka aan muhiimka u ahayn howlaha goobta.
Tirakoobka & Suuqgeynta
Kaliya aqbal cookies
Dejinta Asturnaanta Xogta Shakhsiyeed
keydiso & xir
Kukiyada aasaasiga ah waxay awood u siinayaan howlaha aasaasiga ah waxayna lagama maarmaan u yihiin howlaha saxda ah ee bogga.
soo bandhig macluumaad
Kukiyada suuqgeynta waxaa adeegsada dhinacyada saddexaad ama daabacayaasha si ay u soo bandhigaan xayeysiin shaqsiyeed. Waxay tan ku sameeyaan adoo ku raad joogaya booqdayaasha shabakadaha oo dhan.
Cookie GDPR sharci ah
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah xiriirka Ogeysiis sharci ah